Gịnị ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ọrịa ahụ?
Taa, nrịanrịa bụ otu n'ime nsogbu ụmụaka kachasị enwekarị. Ọ ga-ekwe omume belata ihe ize ndụ ya na opekempe? Kedu otu esi emeso nwata nwoke na-arịa ọrịa? Enwere ihe dị otú ahụ - ihe dị na ime ime. Mama m kwesịrị ọnwa itoolu, n'ụzọ nkịtị kwa ụbọchị, na-agbaso àgwà ha na mkpa nke nwa ọhụrụ; enye nnukwu ihe na-amasị ya, mana o nwere ike imerụ nwatakịrị ahụ. Otu, ma nke bụ eziokwu: n'ihi na nwatakịrị n'ọdịnihu dị ezigbo mkpa maka ndụ dị mma nke nne ya, ya ịjụ ịṅụ sịga, gụnyere ịgba ọsọ.
Ụmụ nwanyị nwere mmuta, ọ dị mfe ịrịa allergies, ọ dị mkpa iji wepụ ihe jikọrọ ya na ndị na-arịa ọrịa allergens, rie nri nke ọma, na-erughị ka a gwọọ gị ọgwụ. Ndị nne na - enwe n'ọdịnihu, na-arụ ọrụ ha, na - akpọkarị ndị na - arịa ọrịa (ndị ọrụ na chemical, ọgwụ, aji, ọrụ nchịkwa, ndị na - edozi ákwà, ndị na - eme achịcha,). Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ọrịa ahụ na otú ọ ga - esi gwa gị.
Ma a na-enyefe ihe nrịanrịa site n'aka ikike nke nnyefe?
N'ime pasent 80 nke ụmụaka na-arịa ọrịa na-efe efe, anamnesis dị arọ. Ọ bụrụ na mama na papa nwere nrịanwụrụ, ihe ize ndụ nke ịmalite ọrịa ahụ na nwata bụ 60-80%; ọ bụrụ naanị otu nne na nna - 45-50%, ihe ize ndụ nke ịrịa ahụ na ụmụ nke ndị nne na nna nwere ike iru ruru 10-20%.
Kedu afọ na nke mbụ ka mmeghachi omume na-akpata nfụkasị na-eme?
Ihe mgbaàmà mbụ nke nrịanrịa (n'ụdị mmeghachi omume) pụtara n'oge na-adịghị anya mgbe amuchara nwatakịrị ahụ wee rute elu ha site na etiti afọ mbụ nke ndụ. N'ebe a, a na-ahụkarị ihe mgbaàmà nke atmatic dermatitis; ihe ka ọtụtụ n'ime ha dara otu afọ. N'aka ụmụaka, ihe ndị na-egosi na ihe oriri na nkwonkwo na-adịkarịghị nkịtị. Ihe kachasị na-egosi na ọkpụkpụ a na-emepụta ihe na-egbuke egbuke bụ akpụkpọ anụ na mgbanwe mgbanwe nke anụ ahụ (reddening, dryness, peeling, thickening) nke akpụkpọ anụ, ọdịdị nke ịkpụcha ihu, olu, isi akpụkpọ ahụ, na ntụ nke akpụkpọ ahụ, n'elu ikpere, na popliteal olulu. Mgbaàmà na-adabere na afọ. A na-ejikarị ọrịa na-akpata Atonic dermatitis na ọrịa nke akụkụ eriri afọ. Ọ dị mkpa icheta na itching bụ ihe mgbaàmà nke ọtụtụ ọrịa; Nchoputa ahụ nwere ike itinye naanị dọkịta ahụ mgbe ọ gbasara ụlọ. Mgbe e mesịrị, iku ume iku ume pụtara. N'ihe dị ka afọ isii ma ọ bụ asaa, ụkwara ume ọkụ bụ nke kachasị. N'oge ọgbọ, "na-eduga" rhinitis na-adighi ahụ.
Kedu ihe bụ igbochi allergies na ọnwa mbụ nke ndụ nwatakịrị?
Ụmụaka nke afọ mbụ nke ndụ nwere ihe ize ndụ dị ukwuu nke allergies chọrọ nlekọta kwesịrị ekwesị (nrụgide, na-ezere ịkpọtụrụ ndị na-eri anụ ụlọ, ma ọ bụ ịmị ara). Nne na-elekọta nwa kwesịrị idebe ihe oriri na-edozi ahụ. A na-eme ọgwụ mgbochi prophylactic na ụmụ zuru okè zuru oke, na-ede ọgwụ dịka ihe ngosi. Nkọwa nke abụọ na-agụnye nchịkọta nke ọgwụ ndị dọkịta kwuru na mmezi nke ọgwụ na-emetụta ọrịa ahụ.
Kedu iwu ndị nne na nna kwesịrị ịgbaso mgbe ị na-ahọrọ nri nri?
Ọ dị mkpa iji wepu chocolate, koko, mmanụ aṅụ, mkpụrụ, àkwá, caviar nke sturgeon, ọkụkọ na anụ anụ, ihe ndị a na-ese siga, mkpụrụ citrus, strawberries, strawberries, tomato, ngwa nri, sauerkraut, pickled cucumbers, mkpụrụ vaịn, apricots apịtị. Ọ ka mma ịjụ onye na-ahụ maka ọrịa ahụ tupu ị banye ngwaahịa ọhụrụ na menu.
Kedu ihe ndị na-apụtaghị ìhè nke ọrịa ahụ?
Site na akpụkpọ anụ - ntụgharị na njirimara na-agbanwe agbanwe; site na anya - itching, mgbanwe mkpali, lacrimation; site na imi - itching, sneezing, congestion nasal na njirimara ebumnuche, yana ụkwara akọrọ, mkpụmkpụ nke ume, ikpu.
Kedu ụdị ụdị nke ahu anataghi?
Atopic dermatitis, rhinitis na-egbu ahụ, asthma bronchial, pollinosis, Quincke's edema, hives, nri na ọgwụ ọjọọ,
Kedu ihe ị ga-enye ndị nne na nna ndụmọdụ banyere obere ọrịa nrịanrịa dị nta?
Atopic dermatitis, ọ dị mkpa ka ị hụ na akpụkpọ anụ nwa ahụ adịghị etinye aka na ihe eji emepụta ihe na akwa ákwà, ọ bụ naanị ákwà owu ka a ga-eji ejiji. Na-ehicha ihe nwa chọrọ ncha dị mfe ma ọ bụ akwa hypoallergenic pụrụ iche. Ịsa ahụ nwa na ncha nwantakiri. Uzuzu uzuzu, ahihia osisi, ajiri nke anu ulo, putara iji npocha ulo - ihe di egwu nwere ike ibute ihe ndi ozo. Anyị aghaghị ịnwa iwelata ha.
Ọ ga-ekwe omume ịnagide nsụgharị ndị dịpụrụ adịpụ nke nrịanrịa na ndị mmadụ, ịgba ọgwụ n'ụlọ?
N'ezie, enweghị ego dị otú ahụ.
Kedu ọrịa ndị nwere ike ịme ihe dị ka ihe nfụkasị?
Cystic fibrosis, isi nke immunodeficiency, ọrịa obi na-arịa ọrịa obi; ajọ nkwarụ na-eme ka njigide nke traktị respiratory; reflux esophagitis, akwa mmetụta uche na mmetụta nke ogige chemical, ogwe aka nke mmegharị ahụ nke ụda olu, scabies, seborrheic dermatitis, psoriasis, ọrịa ahụhụ, nnukwu rhinitis nje na ARI, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kpọtụrụ dọkịta nwere mgbaàmà nchegbu.
Kedu ihe bụ isi akụkọ banyere ọrịa allergies kachasị enweta n'aka ndị nne na nna na-amaghị ihe?
Maka ihe kpatara ya, a kwenyere na ọ bụrụ na nwatakịrị enweghi nfụkasị ahụ, ọ gaghị apụta mgbe e mesịrị. N'ọrịa nwatakịrị ahụ na-emekarị, ndị nne na nna ga-ata ụta, n'ihi na ha anaghị eme ihe ndị chọrọ maka igbochi ọrịa na-edozi ahụ.
Igwe mmadụ na-ekpo ọkụ na ụmụ
Ezigbo ụra siri ike nke nwa amụrụ ọhụrụ
Otu esi ahọrọ akpụkpọ ụkwụ maka nwa
Mgbe ịkwesịrị ịkụda okpomọkụ na ụmụaka
Ụdị Victorian - oge oyi na-eme 2016-17
Ngwakọta chocolate atọ
Ọgwụgwọ cellulite na mmanụ dị mkpa
Kọntịnta cactus nke Mexico na-egbuke egbuke
Ezigbo mmekọrịta: Timati wetara Alena Shishkov na Anastasia Reshetova na ìhè, foto
Dmitry Malikov ga-akpọ natalia Poklonskaya n'ihi PR
Ginger mmanụ na ose na thyme
Ihe maka SPA, nlekọta aka na ụkwụ
Kedu otu esi emeso afọ ọhụrụ gị na onye ị hụrụ n'anya?
Ememe ezumike maka obere nwatakịrị
Gini mere ndinyom di ime ghara itu egwu?
Ngwurugwu bara uru maka aka, ụkwụ na azụ nwa
Ọrịa na imeju nke ndị ọrịa imeju
Otu esi eme ka ugbua na ulo
Kedu ugbo ndị eji ejiji oge oyi a?
Njirimara ọgwụ na nke magburu onwe ya nke onyx
Kedu mgbe nwanyị dị njikere ịmị nwa?